Chii chinonzi FPS Boost? Mutambo wemitambo uye Xbox Series X / S chimiro chakatsanangurwa
Microsoft isati yaburitsa iyo Xbox Series X uye Series S inonyaradza, yakatsanangudza mashoma anobatsira maficha avaizowedzera kumitambo inodzokera kumashure. Auto HDR imwe - iyo inowedzera HDR mhedzisiro pamitambo yekare yenhaka, senge Xbox 360 mazita. Kurumidza Resume imwe - inoita kuti mashoma emitambo igare yakamira uye wotanga ipapo ipapo paunosarudza. Zvino itsva… [Verenga zvakawanda ...] nezve Chii chinonzi FPS Boost? Mitambo rondedzero uye Xbox Series X / S chimiro chakatsanangurwa